Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Crimea sy UNWTO: fandaharam-potoana miafina?
UNWTO dia manana endrika mampiady hevitra sy politika be dia be raha ny Repoblikan'i Crimea no voamarika tao anatin'ny rafitry ny UNWTO General Assembly ao St. Petersburg. Tsy noraharahain'ny media loatra, ninia tsy niraharaha ireo solontena avy any amin'ny firenena eropeana Andrefana, ny mpikatroka Rosiana dia mafy sy mazava tamin'ny fanohanany ny Repoblika faralahy Crimea. Crimea dia nalaina avy any Okraina ary ny ankamaroan'ny firenena andrefana dia mihevitra fa faritra ao Okraina ny faritra.
Tamin'ny 11-12 septambra, ny Governemanta St. Petersburg, niaraka tamin'ny fanohanan'ny maso misahana ny fizahan-tany federaly, dia nikarakara ny fampiratiana Saint Petersburg Travel Hub, izay nanehoana ny mety ho fizahantany ao amin'ny Repoblikan'i Crimea ihany koa. Tamin'ny andron'ny forum dia notsidihin'i Olga Golodets, praiminisitra lefitry ny federasiona rosiana, Zarina Doguzova, Lehiben'ny maso ivoho fizahan-tany federaly, ary Alexander Beglov, Governora misolo toerana ao St. Petersburg.
Nisy fandaharana manokana nokarakaraina tany Moskoa tamin'ny 14 sy 15 septambra. Tao anatin'ny roa andro dia natrehin'ny minisitra, solontena ary solontenan'ny sehatra miankina sy tsy miankina an'ny firenena mandray anjara amin'ny fikambanana ny fivoriana ara-barotra, fivoriana ofisialy ary hetsika ara-kolontsaina.
Ny fivoriana ambaratonga voalohany, notarihin'i Sofiko Shevardnadze, dia nifantoka tamin'ny fizahan-tany ho ampahany amin'ny paikadim-pampandrosoana an'ny tanàna manerantany. Ny hetsika dia natrehan'ny fitarihan'ny UNWTO, Moskoa, lalamby rosiana, manam-pahaizana Google, manam-pahaizana iraisam-pirenena, ary koa ny masoivohon'ny UNWTO avy any Russia Vyacheslav Fetisov.
Ny UNWTO General Assembly dia fihaonamben'ny fizahan-tany lehibe indrindra manerantany. Ireo solontena avy amin'ny mpikambana mahazatra sy mpikambana, izay soloin'ny solontena tsy mihoatra ny dimy, ary koa ny mpanara-maso, dia mahazo miditra amin'ny fivoriana plenary an'ny Antenimiera. Tamin'ny 2015, ny UN General Assembly dia nandray ny fandaharam-potoana 2030 ho an'ny fampandrosoana maharitra sy ny tanjona kendrena maharitra 17.
Cunard cruise line dia nanambara ny dia an-tsambo 2021